अमेरिकामा नेपालीहरूको आफ्नै लगानीको बैंक(क्रेडिट युनियन) स्थापना – Durbin Nepal News
अमेरिकामा नेपालीहरूको आफ्नै लगानीको बैंक(क्रेडिट युनियन) स्थापना
भदौ १२, २०७५ ४:०८ मा प्रकाशित
न्यु योर्क, २७ अगस्ट/ अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीको लगानीमा स्थापना भएको सामुदायिक बैङ्क(एभरेष्ट फेडरल क्रेडिट युनियन) को अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्कीले हिजो उद्घाटन गरेका छन् । बैंकले अमेरिकी केन्द्रीय सरकार अन्तर्गतको नेशनल क्रेडिट युनियन एड्मिनिष्ट्रेसन (एनसियुए) बाट गत साता सञ्चालन अनुमति पाएको थियो । हालसम्म एभरेष्ट फेडरल क्रेडिट युनियनले न्यूयोर्क ज्याक्सन हाइट्सस्थित सम्पर्क कार्यालयबाट प्रारम्भिक काम गर्दै आएको छ ।
यसको अध्यक्षमा डिल्लीराज भट्ट, महासचिवमा अञ्जन श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा विराज रिजाल छन्। त्यसै गरी, सदस्यमा आरसी पोखरेल, विजय पौडेल, राजन कर्माचार्य र जीवन बम छन् । यस्तै अनुगमन समितिमा डा.सुख गुरुङ, डा. केशव पौडेल र क्रेडिट कमिटीमा मोहन गिरी र नवराज केसी रहेका छन् ।
कार्यक्रममा राजदूत कार्कीले नेपालीले सामुदायिक बैङ्क स्थापना गरी अमेरिकामा फरक पहिचान बनाउन सफल भएकोमा बधाई तथा शुभकामना प्रदान गरेका थिए ।
अमेरिकामा विभिन्न देशबाट आएका आप्रवासीहरूले क्रेडिट युनियन सञ्चालन गरेका छन् । सम्बन्धित देशका आप्रवासीको सङ्ख्या एवं आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएपछि यस्तो युनियन सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको उदाहरण देखिन्छ । समुदायको आर्थिक हित प्रबर्द्धनको मूल उध्येश्य लिएर क्रेडिट युनियन स्थापना हुने गरेका छन् । अमेरिकी सरकारले यस्ता सामुदायिक बैङ्कलाई कर छुट दिने हुँदा अरू वाणिज्य बैङ्कको तुलनामा यिनीहरूका ऋणीले कम ब्याजदरमा कर्जा पाउने एवं बचतकर्ताले धेरै ब्याज पाउने अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए ।
यसमा खाता खोल्न नेपाली भाषी हुनुपर्ने वा आफन्त हुनुपर्ने छ । गैर आवासीय नेपालीबाहेक अरूले यसमा खाता खोल्न पाउने छैनन्। अमेरिकामा लाई निक्षेप सङ्कलन एवम् कर्जा प्रवाह दुवै गर्ने अनुमति हुन्छ । जो–जो यसका डिपोजिटर छन् उनीहरू नै यसका मालिक हुन् र उनीहरू नै नाफामा हकदार हुन्छन्।